Ọnụ ọgụgụ ahịa ụlọ ọrụ mgbanwe ụwa ga-akarị ijeri 100 na 2020
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, nnyefe ikike ụwa na nkesa akụrụngwa ahịa na-achọkarị n'ogologo. Mgbasawanye osisi, ike akụ na ụba na ikike ike na mba ndị na-emepe ga-eme ka ahịa mgbanwe ike ụwa si ijeri $ 10.3 na 2013 ruo $ 1 ...
Ọrụ nkwa ： Anyị na-ekwe nkwa, ọnụego ruru eru nke ngwaahịa bụ 100%, na oge ikike bụ afọ 3. Edebe nkwekọrịta ahụ ma jiri ịnụ ọkụ n'obi mezuo usoro nke nkwekọrịta ahụ: nnyefe oge, ọkwa nke nnyefe nke ngwongwo na ndị ọzọ. ; Guzosie ike est ...
Kedu ihe akpọrọ “mkpuchi”, ihe nchekwa nke mkpuchi mkpuchi, kedụ ngwaahịa mkpuchi ngwaahịa?
Ihe a na-akpọ mkpuchi bụ iji ihe na-enweghị ntụpọ iji kewapụ ma ọ bụ kechie ozu ahụ, iji maa jijiji ọrụ nchekwa nke usoro nchekwa. Ezigbo mkpuchi bụ ụzọ kachasị mkpa ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya iji hụ na nchekwa nke ọrụ eletriki akụrụngwa na ci ...